Dood: Xildhibaannada Aqalka Sare Iyo Kuwa Maamul Goboleedyada Oo Ka Hadlaya Wada-shaqeynta Iyo Xeerarka.. – XAMAR POST
By Mohamed Ahmed On Nov 4, 2017
Waxaa ay wada-shaqeynta dhex-mari karta labada dhinac kala hadashay Xildhibaanno ka tirsan maamul goboleedyada iyo Senatarrada aqalka sare.
Xildhibaan Maxamed Axmed Jaceyl oo ka tirsan Xildhibaannada maamul goboleedka Puntland ayaa ka warramay wada-shaqeynta ay tahay in ay dhex-marto aqalka sare iyo baarlamaannada maamul goboleedyada isaga oo sheegaya in xilligan aanu xumeyn xiriirka labada dhinac, Xildhibaankan waxaa uu dalbaday in aqalka sare laga rabo sidii ay ula soo socod-siin lahaayeen oo loogala tashan lahaa baarlamaankooda sharciyada ay ansixinayaan gaar ahaan kuwa taabanaya danaha maamul goboleedyada.
Xildhibaan Cabdirisaq Maxamed Yusuf oo ka tirsan Xildhibaannada maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in weli aaney arag rag aqalka sare ka socda oo baarlamaankooda u tagay isaga oo soo jeediyay in ay tahay in xiriirka uu sidan ka fiicnaado, isla markaana ay si toos ah u wada-shaqeeyaan labada dhinac.
Xildhibaan Axmed Yusuf Xasan oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug waxaa uu sheegay in xiriirka iyo shaqada ka dhaxeysa aqalka sare iyo baarlamaannada maamul goboleedyada ay dastuurka ku taallo, isla markaana ay aheyd in ay kalfadhiyada yimaadaan, shuruucyada sida kuu isgaarsiintana ay aheyd in lagala tashto.
Dhinaca kale, Waxaa arrinta wada-shaqeynta aqalka sare iyo baarlamaannada maamul goboleedyada kala hadlay Senator Cabdirisaq Cismaan Xasan Cismaan Jurille iyo Senator Maxamud Axmed Maxamud(Mashruuc).
Madaxda Dowladda & Maamul Goboleedyada oo isku mari la’ qodobada qaarkood